Imikhiqizo yensimbi Factory | China Imikhiqizo yensimbi yabakhiqizi nabahlinzeki
zokuhlobisa screen iphaneli laser cuttig
Imininingwane ye-Model number CP-SF010 Finish Polished / brushed Size Floor or wall mounted Material Metal or Stainless steel Shape Per made made Natural Style design. Imiklamo ikhuthazwa yinsimu yasentwasahlobo. Izimbali noma ukubukeka kwephethini kuvezwa ngendlela engaqondakali ngokusatshalaliswa kokulingana kwamaphethini wejometri alula. Izinhlobo ezahlukahlukene ezinomumo ohlukile, njengembali, izinkanyezi, amabhaluni, izinhliziyo, iqabunga, izinyathelo, njll.
ukukhuphuka izitebhisi zensimbi engagqwali
Imininingwane ye-Model number CP-SR002 Finish Polished / brushed Size Floor or wall mounted Material Metal or stainless steel Shape Per customized made hardness, impact resistance, not easy to deformation. Ukumelana okuhle nokungenamanzi nokugqwala, akukho ukugqwala endaweni enomswakama, amandla okulwa ne-oxidation aqinile, okuhlala isikhathi eside ekusetshenzisweni kwangaphandle. Non-enobuthi, ukungcoliswa-free. Isitimela esinezinyathelo sinobuso obucwebezelayo besiliva nokubukeka okuhle nge-brushed fi ...
steel art imisebenzi laser ahlabayo
Incazelo yeModeli yenombolo CP-2T-SF009 Qeda Okuphucuziwe / okuxubha Izinto 304 insimbi engagqwali, isitayela sesiliconisi ngomklamo osikiwe Ubuciko bodonga obukhulu bokuhlobisa kwangaphakathi endlini, amakamelo, ikamu, igceke nezipho zokufudumeza indlu. Sakha ubuciko bensimbi obuletha injabulo nentokozo, ubuhle empilweni yakho. Ilungele ukuhlobisa kwasekhaya ,, ukuhlobisa amahhovisi, ukuhlobisa Igumbi lokuhlala. Isitayela esiyingqayizivele sesitayela sensimbi: ukwakheka okuhle kungaba ukugxila okuhlukile kwanoma yisiphi isikhala. Yonke imihlobiso yodonga izoletha okuhlukile ...
imikhiqizo yensimbi ehlanganisiwe
Umshini wethu we-laser ungakhiqiza iphaneli yokusika ehlukahlukene works.There izimpahla eziningi ezenziwe ngolimi singazicubungula. Njengokugqoka amabhokisi wezicubu ajwayelekile, ayisikwele nalesi sembozo sesitayela; Ufihla kalula amabhokisi wezicubu zekhadibhodi; Idizayini ehlanzekile, ebushelelezi ilungele ukusetshenziswa kwasekhaya noma kwezebhizinisi; Incoma noma yikuphi ukuhlobisa. Ngosayizi ophelele wokubamba amabhokisi wesikwele amaphakathi amaphakathi nosayizi abaningi bamaphaphu ebusweni noma kwezicubu.Open bottom ivumela ukushintshwa okulula kwamabhokisi wezicubu angenalutho R ...